आधुनिक विवाहका आठ प्रकार, तपाईँको विवाह कस्तो? – MySansar
आधुनिक विवाहका आठ प्रकार, तपाईँको विवाह कस्तो?
Posted on June 28, 2015 June 28, 2015 by mysansar
स्कूल कलेजमा विवाहका प्रकारहरु त पक्कै पढ्नुभएको होला। स्कूल कलेज जाने फुर्सदै नभएको भएपनि पुराणमा बिहेका कति प्रकार छन् भनेर पुरेतले भनेको होला। मागी विवाह, पैशाची विवाह, गन्धर्व विवाह यावत खालका विवाहको बारेमा। खै आफ्नो पनि बिहे गर्ने उमेर आएर हो कि जान लागेर हो अचेल विवाहको बारेमा चासो लाग्न थाल्या छ भन्या । अब हेर्नुस् यो फेसबुकको भित्ता सेतो र आकासे निलो हुनुपर्ने बिहेको लगन आयो कि रातै देखिन्छ। त्यही देखेर नि के गरम के गरम भएर यो ब्लग लेख्दैछु । नेपालको निम्ति देश, काल र परिस्थिति अनुरुप विवाहका प्रकार छुट्याउने प्रयास गरेको छु।
करार अवधि विवाह
यो विवाह चै बेरोजगार युवाहरु रोजगारको सिलसिलामा खाडी मुलुक पसेको पहिलो दुई बर्षे करार अवधिमा गरिन्छ । घरमा आमा बुवालाई बुहारीको खाँचो छ भनेर जब क्यार क्यार गर्छन तब मन नलागी नलागी बिहे गर्ने गरिन्छ । बल्ल बल्ल एक दुई महिना छुट्टी मिलाएर आएको मौका पारेर झ्याईं पारेर श्रीमान पुन: परदेश लाग्छ भने श्रीमती एता श्रीमान फेरि आउने दिन गन्नतिर लाग्छिन । अर्को करार अवधि नसकिन्जेल अथवा बिदा नमिले सम्मको लागी बाई बाई ।
टु वे विवाह
नेपालमा हुँदा पो छिमेकीले कुरा काट्लान भनेर बाउ आमाले लभ गर्दै हिड्नबाट रोक्ने गर्थे । युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया छिरिसकेका छोराछोरीलाई लभ नगर्न दबाब दिन सकिन्न । बाउ आमालाई डर फेरी, आफ्नो छोरा छोरीले बिदेशी नागरिकसंग बिहे गर्देलान जात, धर्म भाषा केहि नमिलेर ज्वाईं-बुहारीसंग बोल्नै गाह्रो होला भनेर सकेसम्म नेपाली नै रोजे हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राखेका हुन्छन् । त्यस्तै छोराछोरीलाई पनि नेपालबाट बिहे गरेर विदेश लगेर भाषा, रहन सहन, काम धन्दा सबै कुरा सुरुबाट सिकाउनुपर्ने कुराले चिन्तित तुल्याएको हुन्छ । दुवै पक्षको समस्यालाई हल गर्न विदेशमा रहेका युवायुवतीहरु त्यहि बसिरहेको नेपालीसंग इलु इलु गर्छन र एकै समयमा नेपाल फर्किन्छन, काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थललाई एक दुई महिना लामो डेस्टिनेसन पोइन्ट बनाउँछन । नेपाल मै बिहे गर्छन र पुन: आफ्नै गन्तब्यतिर फर्किन्छन । विवाह गर्नु अघि नै दुवैले नेपाल जाने र फर्किने ‘टु वे’ टिकट काटिसकेको हुनाले यस विवाहलाई ‘टु वे’ विवाह भनिन्छ ।
युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया जस्ता बिकसित मुलुकहरुमा काम गर्दै अथवा पढ्दै बसेका युवा युवतीहरु नेपाल मै बसिरहेकाहरुसंग बिहे गरे लगतै आफु संगै लैजाने भनेर जग्गे मै कसम खाएर गरिने विवाह डिपेण्डेण्ट विवाह हो । यो विशेषत: पुरुषले महिलालाई डिपेण्डेण्टमा लैजाने प्रचलन हुन्छ । महिलालाई विवाहपछि आफ्नो जन्मघर छोड्नुपर्दाको भन्दा बढी चिन्ता डिपेण्डेण्ट भिसा नदेलाकी भन्ने चिन्ता हुन्छ । त्यस्तै पुरुष चै सुहागरातमा भन्दा बढी एक्साइटेड हुन्छ भिसा दिएको खबर सुन्न ।
जब जब हुर्केको छोरो लम्फु भएर निस्किन्छ । घरी खुकुरी काण्ड, घरी गाँजा भाङ्ग धतुरो काण्ड मच्चाउँछ । राम्रोसंग पढ्न बुद्धिले दिन्न, युरोप अमेरिका छिर्न इमिग्रेसनले दिन्न । साउदी दुबई छिरौं बाउको जुँगाले दिन्न । यस्तो अवस्थामा वरिपरिका छिमेकी र आफन्तको सल्लाह बमोजिम छोरो सुधार्नेको लागि गरिने विवाह हो रिह्याब विवाह । स्वास्नीको जिम्मेवारी आइपरेपछि छोरो सुध्रेला कि भनेर बिहे त गरिन्छ तर नाति जन्मिएर पनि बिग्रिने बेला भैसक्छ छोरो सुध्रिने त परको कुरो ।
नि:शुल्क फेसबुक एकाउण्ट बनाएर, नि:शुल्क साथि बनाएर नि:शुल्क, प्रोफाइल पिक्चरमा लाइक, कमेन्ट र मेसेज गरेर अन्तत: दुई जनाको प्रेमसम्बन्ध स्थापित हुन्छ । नि:शुल्क भाइबरबाट स्वर पनि सुनिसकेपछि प्रेम गाढा हुन्छ । एकाधपटक भेटघाटपछि दुवै जना विवाह गर्ने निर्णयमा पुग्छन तर परिवार, जात, वर्ग, धर्म यावत तगारो आइपर्छ । फलस्वरूप केटिलाई आफ्नो कपडा पोको पार्न लाएर बाइकमा राखेर उछिट्याएर गरिने विवाह इकोनोमिक विवाह हो । मन्दिरमा पुजारीलाई दिनुपर्ने पकेटमनि, देवताको लागि भेटि र पेट्रोलको पैसा बाहेक यो विवाहमा खासै खर्च नलाग्ने भएकोले यसलाई इकोनोमिक विवाह भनिन्छ । नत्र अरु विवाह गर्दा मेरी बास्सै, सुनको भाउ तोलाको ५० हजार छ । केटा केटी दुवै पट्टि मेखमानि, क्याटरिङ्ग, दाइजो साइजो गर्दा बजेटले पन्ध्र बीस पेटी हान्छ । इकोनोमिक विवाह बरु सस्तैमा उम्किने भएकोले लोकप्रिय पनि हुँदैछ । यो प्रकारको विवाह आर्थिक रुपमा किफायती मात्र होइन, भेदभाव र छुवाछुत युक्त समाजलाई परिवर्तन गर्ने हैसियत पनि राख्छ ।
कर्मठ र प्रगतिशील युवा युवतीहरु परिवार, देश र समाजको लागि केहि गर्छु भनेर दृढ संकल्प बोकेका हुन्छन । कर्मरत रहँदा त्यस्तै खुबी र क्षमता भएको पार्टनर फेला पारेर विवाह गर्नुलाई मिडिया विवाह भनिन्छ । यो विवाहको रितकर्म, भोज भतेर सामान्य भएपनि संचार माध्यमले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाईदिञ्छन । विवाहपछि पनि च्याउसरि खुलेका टेलिभिजन र रेडियोको कुनै न कुनै गृहस्थीजिबन सम्बन्धि कार्यक्रममा बोलाएकै हुन्छन । यो खालको विवाह सबैको निम्ति आदर्श विवाह हुनेगर्छ ।
शीर्षक सुनेर केही गेस गर्नु भएको भए गलत हुनुभयो । त्यो खालको बाल विवाह त गैर कानुनी हो । यो बाल विवाह अर्कै छ । मानवीय सुख र आनन्दको निर्धारक तत्व भौतिक उपलब्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा, राम्री श्रीमती अथवा श्रीमान होइन बरु अन्तर्मन हो भनेर केहि व्यक्तिहरुको चेत खुलेको हुन्छ । त्यस किसिमका व्यक्तिहरुले न विवाहपछि यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर सपनाको महल बनाएका हुन्छन न विवाहलाई त्यति ठूलो महत्व दिएका हुन्छन । केवल सन्तान उत्पादनको निमित्त विवाहलाई सामाजिक सम्बन्धको रुपमा स्वीकार गरेर आफ्नो अन्तर्मनको यात्रामा लीन भएका हुन्छन । एकल अन्तर्मनको यात्रा बाहेक अन्य कुनै पनि बिषयलाई ‘बाल’ नदिने भएकोले यस किसिमको विवाहलाई ‘बाल’ विवाह भनिन्छ । ओशोका भक्तहरु त देख्नुभएको होला ?
कतिपय युवायुवतीहरु न पढाईमा सफल हुन्छन, न हातमा केहि सिप, न मनमा केहि गर्ने जोश-जाँगर । तैपनि सुख र सन्तुष्टिको चाहना उनैलाई बढि हुन्छ । जसै गरेपनि सुख पाइएन बाबा भन्दै अन्तत: विवाह गरेपछि पो सुख पाइन्छ कि भनेर गरिने विवाह पेण्डुलम विवाह हो । त्यत्रो आशा गरेर गरेको विवाहले पनि खोजेको सुख नदिएपछि फेरी एता र उता भौतारिनु यस विवाहको प्रमुख बिशेषता हो । विवाहपछि “कस्तोसंग परिछु नि” भन्दै पुर्पुरोमा हात लगाउनु यस विवाहको नियमित शृंखला हो ।
पुनश्च: यस ब्लगले करिब करिब सबै विवाहित नेपालीको व्यक्तिगत जीबनसंग मेल खाने भएकोले सामान्य रुपमा लिनुहोला !
7 thoughts on “आधुनिक विवाहका आठ प्रकार, तपाईँको विवाह कस्तो?”
Top rated article for mysansar
हाहा सबै प्रकार को बिबाह दामी छ तर बिशेष गरि रिह्याब विवाह चाही दामी लाग्यो ..
शंकर जी यो तपाइले भनेको बिहे इकोनोमिक्स बिहे मै पर्ने आउंचा
महिलालाई विवाहपछि आफ्नो जन्मघर छोड्नुपर्दाको भन्दा बढी चिन्ता डिपेण्डेण्ट भिसा नदेलाकी भन्ने चिन्ता हुन्छ । त्यस्तै पुरुष चै सुहागरातमा भन्दा बढी एक्साइटेड हुन्छ भिसा दिएको खबर सुन्न । this phrase is just hilarious ad=nd bitter truth hahaha
भुडी बोकाई बिहे :
राम्री केटि दखे पछि झिल्के हरुले जसरि ,तसरी फसाई बा रेप नै गरि भुडी बोकाई दि सकेपछि
बाध्य भएर गरिने बिहे |
Thanks for nice article. It has concluded the our contest. I suggest you to choose the economic one.